ဖေဇော်ဂျီ ဖိုးဝိဇ္ဖာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆေးဖော်ခန်း - D-lann
By edi tor February 8, 2020
““ဇော်ယောင် ဂျီယောင်..ဆေး ကြိတ်တဲ့တောင်…သင်ဇာသူ ယောင်..ချစ်တဲ့ လုအောင်””
““အလိုလေး..ဖေဇော်ဂျီရယ်..သီချင်းတကြော်ကြော်နဲ့ အတင်းကို ပျော်နေပါရော့လားကွဲ””
““အို..ဘယ်သူများမှတ်တယ်..လိပ်စာမရှိတဲ့ ဝိဇ်္ဇာငတိပါလား..ပျော် ပါတယ်ဗျ..ပျော်သဗျ..ပျော်ဆို လောကပါလ နတ်မင်းကြီးများက တာဝန်ကျရာ လူတို့ဌာနီ မြန်မာပြည် ကြီးဆီကနေ ခွင့်တစ်ရက်ပေးလိုက် သမို့..သူယောင်လေးတွေဆီ အတူ ကြောင်ဖို့ သွားရမယ်ကိုးဗျ””
““အယ်လဲ..တယ်လည်း ထူးဆန်း နေပါလား..ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဖေဇော်ဂျီ နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ဆယ် တစ်ခါမှ ခွင့်ရတယ်မကြား ဖူးပါဘူး..အခုများ..ဘယ့်နှယ့်ဖြစ်ရ ပါလိမ့်””
““..ဘယ့်နှယ့်ဖြစ်ရမတုန်း ဖိုး ဝိဇ်္ဇာရယ်.. နှစ်ပေါင်းခုနှစ်ဆယ်လုံး ဟိုအဖွဲ့ ဒီအသင်းတွေ သေနတ်ကိုင် ဗျင်းလာကြတာ ဒီဂနေ့တော့ သေနတ် သံတစ်ချက်မှ မထွက်အောင် ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်နေလို့ ကျုပ် ခွင့်ရတာ ဗျိုး..ရှင်းပလား””
““ဟယ် ကျားသားမိုးကြိုး၊ ထူး ပါပေ့၊ ဆန်းပါပေ့ရယ်ဗျာ..ဘယ့်နှယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခါပြီး တိုင်း လက်နက်ကိုင် တစ်ဖွဲ့တိုးပြီး ပစ်နေခတ်နေကျဟာ ဘယ့်နှယ့် ရုတ် တရက်ကြီး ငြိမ်ကျသွားရသတုန်း..ထူးတော့ ထူးပြီ ထင်ရဲ့””
““ထူးဆို…ဖိုးဝိဇ်္ဇာရယ် ..ဒီနေ့ ဟာ…အရှေ့ဘက် စိန့်တိုင်းပြည်က ပေါက်ဖော်သခင်ကြီးရှီ ရွှေပြည်ကြီးထံ ခြေစင်္ကြာဖြန့်ခင်း ကြွချီလာတဲ့သမယ ပေကိုးဗျ””
““အလို..ဒါ့ကြောင့်ကို..ဆရာ ကြောင်သိုးကြီးလာတော့ ရန်ဖြစ်နေတဲ့ ကြွက်ဆိုးလေးတွေ မျက်လုံးကလေး ပြူး၊ နားရွက်ကလေးထောင်၊ အမြီး လေးတွေ ကုပ်နေသလိုမျိုးပေကိုး..အိမ်း..ကောင်းပါလေ့ ဖေဇော်ဂျီ..ကောင်းပါလေ့””
““ကောင်းပါလေ့ဆိုတာ ခင်ဗျား ကြောင်သိုးကြီး ရှိနေတုန်းပဲ ကောင်း မှာ..ဖိုးဝိဇ်္ဇာရ၊ ကြောင်သိုးကြီး ပြန်ရင် ကြွက်ဆိုးလေးတွေက အချင်းချင်း ဒချိ ဒချိ ဝုန်းဒိုင်း ဂလိုင်း ကြဦးမှာ..ကျုပ် က အဲ့ဒီအခါကျ အသည်းအသန် ပြန် ပြေးရဦးမယ်ဗျာ””
““အင်း..ဂလိုဆိုတော့လည်း ဟုတ်ပေသား..ဖေဇော်ဂျီရဲ့..ဒီတော့ ရွှေပြည်ကြီးထဲ အပစ်အခတ်တွေရပ်စဲ ပြီး အမြဲ ငြိမ်းချမ်းအောင် မလုပ်ချင် ဘူးလားဗျ””
““ဘယ့်နှယ့် ပြောပါလိမ့်..ဒီလို ပညာရှိမျိုး ရှိလို့ကတော့ ဖေဇော်ဂျီ တို့ က အပြေးအလွှား သွားပင့်လိုက်မှာ ဗျိုး””
““ရှိပါသည်ကောဗျာ.. အသူရာ တစ်ဂျားနဲ့ ရွှေပြည်တော်တစ်လွှားမှာ ပြိုင်ဘက်မရှိ ပညာအရာ အကုန်ပြီးတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဗြိနောစကီး ဆိုတာ မကြားဘူးပေလားမောင်””
““ဒေါက်တာဗြိနောစကီး ဟုတ် လား..ဂလောက် အူကြောင်ကြားနိုင်တဲ့ နာမည်မျိုး ဆရာဝန်ထဲ မကြားဖူးပေါင် ဗျာ””
““ဖေဇော်ဂျီနှယ့်..ဒေါက်တာပါ တိုင်း ဆရာဝန် မှတ်သကိုးဗျ..မှတ် ထားဗျ..ဒေါက်တာပါတိုင်း ဆရာဝန် မဟုတ်ဘူး..ဝန်ကြီးဗျ ဝန်ကြီး.အာ မဟုတ်ဘူး..ပညာရှိဗျ ပညာရှိ””
““ကဲ ဟုတ်ပါပြီ မောင်ဝိဇ်္ဇာ … ဒီတော့ဖြင့် ကျုပ်က အဲ့ဒီ ဒေါက်တာဗြိ နောစကီးဆီ ဘာသွားလုပ်ရမတုန်း””
““ပြည်တွင်းစစ် မဖြစ်တဲ့နည်း..ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ့် နည်း သွားတောင်း ပေါ့ဗျ””
““အလိုလေး..တယ်ဟုတ်ပါလား ..ကဲ..လာဗျာ..ဖိုးဝိဇ်္ဇာ..မြှောက် ချုပ်ဆောင်းစာအရ မျောက်ဥခေါင်း ပမာပ ဝါရဏသီသော် ဆီလျော်အောင် ပြည်တော်အထိ ပညာရှိဆီ မြန်းပို့စေ ဗျား””
… … …. ….. ….. ….. ….. …. ……
ဖေဇော်ဂျီ နှင့် ဖိုးဝိဇ်္ဇာ တို့ကား ဒရုန်းအသွင် နှလုံးဆင်လျက် လေပေါ် ပျံဝဲလာရာမှ ဆင်မင်းဈေးအနောက် ဘက် ကိုးသုံးလုံး ဘီအီးဆိုင် ရှေ့နား အရောက်တွင် ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက် တာဗြိနောစကီးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလေ တော့သည်။
ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဗြိနော စကီးသည် ပညာရှိသူတော်ကောင်းပီပီ ဘီအီးကို စပါကလင်ဖြင့်ရောလျက် သံပရာသီးတစ်စိပ်ကို ဆားတို့ကာ မြုံ နေလေ၏။
““ဟုတ်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ကထိန် ကာလလည်း ပြီးပါပြီ ခင်ဗျားတို့ အလှူ လိုက်ခံတာ မပြီးကြသေးဘူးလား””
““မဟုတ်ပါဘူး..ပညာရှိမင်းရယ် ..ကျုပ်တို့က တကယ့် ဇော်ဂျီနဲ့ ဝိဇ်္ဇာ ပါ။ အလှူခံလိုက်တဲ့ အပူခံငမိုက်တွေ မဟုတ်ရပါဘူး”” ““အိမ်း..ဟုတ်ပြီလေ..ဇော်ဂျီနဲ့ ဝိဇ်္ဇာက ကျုပ်ကို ဘာကြောင့်များ လာ ရှာရသတုန်း””
““အကြံအဉာဏ်လေး တောင်းချင် လို့ပါ..ပညာရှိမင်းရယ်””
““ကဲ..ဟုတ်ပြီ..ဒါဆို အလကား တော့မရဘူးဗျ။ နိုင်ငံခြားမှာဆို အကြံ ပေးခတွေ ဘာတွေယူကြတာ။ ကျုပ် လည်း ယူမှဖြစ်မယ်။ အများကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာ သံပုရာသီးကြီး လှိမ့်ကိုက်နေရတာဆိုတော့ အီးပါရင် ဖင်ဝတောင် ချဉ်လာပြီ..ပဲခြမ်းသုပ်လေး တပွဲတော့ ဝယ်ကျွေးဗျာ””
““စားပါ စားပါ ပညာရှိမင်း…သုံးဆောင်ပါ..သြော်..ဒါနဲ့ ခုနပဲ ကျုပ်နဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ ငြင်းလာကြတာ..ပညာရှိမင်းရဲ့ နာမည်ရှေ့က ဒေါက်တာ ဘွဲ့က ဆရာဝန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး နော်””
““ထပ်သရီး..ကျုပ်လား ဆရာဝန် ဖြစ်မှာ…ဆယ်တန်းကို ခြောက်ဆယ့် ငါးခါဖြေပြီး ရတဲ့အမှတ်အကုန်ပေါင်း ရင်တောင် ဆေးမှတ်မမီဘူးဗျ””
““နို့ ဒါဆို ဒေါက်တာဘွဲ့က””
““ဘာမှ မဟုတ်ဘူးဗျ..အခုနေ ခါ အစိုးရက နာမည်ရှေ့ ဒေါက်တာပါ ရင်ကို အမတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဝန်ကြီးဖြစ်ဖြစ် ခန့်တယ်ဆိုလို့ပါ။ အဲဒါတွေ မဖြစ် လည်း အစိုးရက ဖွဲ့တဲ့ဟိုကော်မတီ ဒီကော်မတီတွေမှာ လူကြီးဖြစ်ရလည်း နည်းလားဆိုပြီး နာမည်ရှေ့ ဒေါက်တာ တပ်ထားတာပါ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ””
ဇော်ဂျီနှင့် ဝိဇ်္ဇာ တစ်ယောက် မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်လိုက်ကြ သည်။
““နေပါဦး ပညာရှိကြီးနာမည်က ဗြိနောစကီးဆိုတော့ ဘာလူမျိူးများ တုန်း””
““ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး..တစ်ချိန် က ဆရာဇဝနက ပရော်ဖက်ဆာဇဝနော စကီးဆိုပြီး သရော်စာရေးဖူးတာကို အားကျတာရယ်၊ နောက်တစ်ခုက လီနင်တို့၊ ထရော့စကီးတို့ဆိုတာ ရုရှား နာမည်တွေလေ၊ ဒီနာမည်ဆို အဘတွေ ကတောင် ကိုးကွယ်ကြောက်ရွံရတာ မဟုတ်လားဗျ။ ဒါကြောင့်ပါ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ..ကဲ..မေးစရာရှိတာ မေးဗျာ။ ကြာရင် ကျုပ် ဝက်ခေါင်းသုပ်တစ်ပွဲပါ ထပ်မှာမိတော့မယ်နော်””
ဝိဇ်္ဇာနှင့် ဇော်ဂျီ အလန့်တကြား ဖြစ်သွားသည်။
ဘယ့်နှယ့် ဝက်ခေါင်းသုပ်က တစ်ပွဲရှစ်ရာကိုး။
““ဟုတ် ဒီလိုပါ ပညာရှိမင်း..ဒီက ဖေဇော်ဂျီဟာ ပြည်တွင်းစစ်စောင့် ကြည့်ရတဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကပါ တယ်။ ဒီနေ့တော့ တိုက်ပွဲတွေ တစ် နိုင်ငံလုံးမဖြစ်ကြပါဘူး။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ စိန့်တိုင်းပြည်က သခင် ကြီးရှီ ရောက်နေတဲ့အတွက် ကြွက် ကလေးများ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေတာပါ။ ဒီလိုအမြဲ တိုက်ပွဲတွေ မရှိ ငြိမ်းချမ်း အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ ဖေဇော်ဂျီ က သိချင်တာပါ””
ပညာရှိ ဒေါက်တာဗြိနောစကီး သည် ဘီအီးခွက်ကို တကျိုက်ထဲ မော့ချလိုက်သည်။
““ဘာများလဲလို့ဗျာ..ဒါများ အလွယ်လေး..ကဲ ဖေဇော်ဂျီ ခင်ဗျားမှာ တန်ခိုးရှိတယ် မဟုတ်လား””
““ကဲ ဒါဆို ဒီနားလာ.အပစ် အခတ်တွေရပ် ငြိမ်းချမ်းစေမယ့်နည်း ….တိုးတိုးလေး ပြောပြမယ်””
ဒေါက်တာဗြိနောစကီးက ဖေဇော် ဂျီကို တိုးတိုးလေး ကပ်ပြော၏။ ထို့နောက် ဖေဇော်ဂျီနှင့် ဖိုးဝိဇ်္ဇာတို့ သည် ဒေါက်တာဗြိနောစကီးအား ဆလံအကြိမ်ကြိမ်ပေးကာ ကောင်းကင် သို့ ပျံတက်သွားကြလေသည်။
သခင်ကြီး ရှီ ပြန်သွားပြီး နောက် တစ်နေ့။
““ဝုန်း ဒိုင်း ဒက် ဒက် ဒက်””
အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်ဆီမှ သေ နတ်သံ ဗုံးသံများ ထွက်လာချိန် ဖေဇော်ဂျီ အမြန်ရောက်သွား၏။
ထို့နောက် ဒေါက်တာဗြိနောစကီး ပေးသည့် အကြံအတိုင်း နာနာရုပ် အတတ်ဖြင့် သခင်ကြီးရှီ ပုံစံအသွင် ပြောင်းကာ နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲအတွင်း ဝင်ရပ်လိုက်လေသည်။
““ဟာ..သခင်ကြီးရှီ… ရှီးဖော် ရှီ ဟေ့..ဟေ့ကောင်တွေမပစ်ကြနဲ့တော့ ရှီးဖော် ရောက်နေတယ်..ရှီးဖော်””
တဖက်မှ သေနတ်သံများ တိခနဲ ရပ်သွား၏။
““ဟေး ..ရှီကောကော ရောက် နေတယ်ဟ..အပစ်ရပ်..အပစ်ရပ်”” တစ်ဖက်မှလည်း တိတ်ဆိတ်သွား လေသည်။
ဇော်ဂျီကား..ရှီကောကော အစွမ်း အံ့မခမ်းပေတည်းဟု ရေရွတ်မိလိုက် သည်။
ထိုစဉ် မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ဆီမှ ဝုန်းဒိုင်းဂွမ်း အသံများ ထွက်လာပြန် သည်။
ဇော်ဂျီလည်း အမြန်ပြေးပြီး ရှီ ကောကော အယောင်ဆောင်ကာတိုက် ပွဲကြား ဝင်ရပ်ရပြန်၏။
တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့် နှစ်ဖက်လုံးမှ သေနတ်သံများအစား ဝမ်ဆွေ့ ဝမ်ဆွေ့ ဝမ်ဝမ့်ဆွေး ဟူသော ဆုတောင်းမေတ်္တာ သံများ ထွက်လာ၏။
သာယာပေစွ။ ဖေဇော်ဂျီ.. ကြာကြာ မသာယာနိုင်အား။
အရှေ့မြောက်ဆီမှ အသံထွက်လာ ပြန်သဖြင့် ပြေးရပြန်လေပြီ။ အရှေ့မြောက်ဆီ ရောက်နေတုန်း အနောက်တောင်က ချကြပြန်ပြီမို့ ပြေးရပြန်သည်။
ဖေဇော်ဂျီ တစ်ယောက် သခင် ကြီးရှီ အယောင်ဆောင်ကာ အရပ်ရှစ် မျက်နှာ ပတ်ပြေးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နေရစဉ် အကြံပေးသုခမိန် ဒေါက်တာဗြိနောစကီးကား ထုံးစံ မပျက် ဘီအီးကလေးမြို့ သံပရာသီး လေး မြည်းလျက်။